Awoodda dowlo, doorka degmo, kan aqoonyahan iyo casharada canshuur ururinta – Radio Daljir
Maajo 1, 2018 8:09 g 0
Mawduucii hore ee “Siyaasiga waano ma deeqdo ee xisaabtan baa deeqa” waxa aan diiradda ku saarney waxqabadka looga fadhiyo Guddoomiye Degmo iyo la xisaabtanka sida uu hadba uga soo dhalaalo hawsha loo igmaday.
Haddaba aan Guddoomiyaha iyo shacabkiisa xisaabtanka uga fadhiyo u dulmarno in dowladi tahay degmooyin isbiirsadey, degmo kastana, mid yar iyo mid weynba, ay lafdhabar u tahay hannaanka dowladnimo. Sidaas darteed degmo kasta (iyo dowlad kasta) waxaa looga fadhiyaa in ay saddex shay guul ka gaadho:
In ay (degmo/dowlad) tahay tan kaliya ee xoog ku maroorsata awoodda dilka iyo ciqaabta oo aysan marnaba cid kale u dabafariisan
In ay leedahay xabsi wax walba u dhanyihiin oo suurtagaliya qodobka 1aad
Canshuur ururin fulinteeda suurtagaliyeen qodobada kore
Markii lagu guulaysto labada qodob ee kore waa in loo soojeesto qodobka saddexaad, ahna mid aan waxba la fulin karin la’aantiis; saas oo ay tahayna si sahlan loo fulin karo haddii wax laga barto casharada canshuur ururinta. Ma rabno in aan Guddoomiyaha cashar u dhigno, laakiin saddex qodob isweydiintoodu waa muhiim:
Waa maxay waxa ugu sahlan, dalka sharci ka ah, dadku raalli ka wada yihiin, nafacoodu uu yaryahay amaba aan nafac laheyn, canshuur badan laga heli karo, sida ugu sahlana loo canshuuri karo?
Waa maxay wax daruuri u wada ah dadka oo dhan, nafta aan looga maarmin, maalin kasta la canshuuri karo, lagu canshuuro canshuur tan ugu yar, si aan marnaba loo dareemin, laakiin dhali karta dakhli canshuur kan ugu badan?
Waa maxay wax la canshuuri karo, laakiin aad u dhib badan in canshuur laga qaado, lagamamaarmaana u ah hormarka iyo waxbarashada deegaanka?
Saddexdaas qodob waa kuwo mar hore jawaabahooda la helay, laakiin aan cashar laga baran amaba aan si fiican loo fahmin, degmoyinka qaar ka hirgaley, qaar hirgelintu ka qaldantay, laakiin mar kasta la sixi karo. Waana sidan hoose:
Waa daroogada jaadka. Waa mid waqtiga maanta la joogo sidii la rabo loo canshuuri karo. Waa mid u baahan in cashuurista jaadka loo maro hannaan dowlo. Loo canshuuro kiilo (KG) ama jawaan ahaan. Loo canshuuro boqoleey ama % kiiba jaan go’an KG kasta. Waqtiga dhow dakhliga canshuurta jaadku waa mid qayb weyn ka qaadan karta ammaanka iyo hormarka degmada. Waqtiga fog waa mid sida canshuurta loogu badinayo loo yareyn karo isticmaalka jaadka iyo dhibihiisa bulsho iyo kuwiisa caafimaad. Waa daroogo in shacab ka mudaharaado ma aha e aan loo mudaharaadi doonin. Laakiin maadaama ay tahay dakhli la isku halleeyo waa mid u baahan in marka hore loo qoro sharcigii maareyn lahaa. Waa mid u baahan daraasad cilmiyeysan, deedna wada xaajood inta ay khuseyso, ugu danbeyna yeelata fulin aan leecleec laheyn.
Waa wax kasta oo la cuno oo la cabbo. Waa canshuurta iibka, lana saaro wax kasta oo laga iibiyo qof kasta oo shacab ah. In kasta oo canshuur la qaado waqtiga ay badeecaduhu ka soo degaan dekedaha, hadana waa in dukaan walba iyo makhaayad walba la baro hannaanka canshuurta iibka. Ma aha hawl sahlan, waana mid ay degmooyin badan isku dayeen, laakiin ay weli maareyn la’yihiin. Taasna dhowr arrimood baa loo sababeyn karaa: aqoon xumo iyo daraasad la’aan, tiro-koob la’aan iyo jaan-goynta boqoleyda canshuurta oo aan laga dhigin wax aad u yar si marka hore shacabka loo baro canshuur bixinta, deedna loo hirgaliyo tirakoobka dukaamada iyo makhaayadaha looga fadhiyo canshuur ururin. Tirokoob kabacdina loo carbiyo shaqaale aan qaad-cun aheyn, yaqaan hannaanka canshuur ururinta, u badan haween, ku shaqeeya mushaar sugan iyo gunno ku saleysan boqoleey lacagta ay soo aruriyeen, oo hadana aad loogu carbiyey hannaanka canshuur ururinta iyo ladhaqanka macmiilka. Canshuur bixiyaha oo loola dhaqmo sida macmiilkii waxa ay sahleysaa canshuur bixinta. Jirtaayoo sida wax kasta oo faa’iido looga fadhiyo loo maareeyo waa in dowladda iyo degmadu ayana ay marka hore maalgashadaan hannaanka canshuur ururinta iyo tababarka canshuur ururiyaha. Wiil af cagaaran oo aan waligiis guri iyo shaqo toona lagu carbin yaan marna laga filan lagana sugin in uu la yimaado eedaab iyo nidaam canshuur ururin.
Waa canshuurta guryaha. Waa canshuurta ugu dhib badan in la qaado, taas oo loo sababeeyo boqoleyda canshuurta oo badan. Degmadu waa in ay ogaato in guryo badan canshuur yar laga qaado waa ay ka dakhli badantahay in guryo kooban canshuur badan la saaro. Sida kaliya oo taas lagu suurtagalin karaana waa boqoleyda canshuurta oo aad loo yareeyo iyo deegaanka oo jaan-jaan loo qaybiyo, sida deegaanka 1aad (faras magaalaha iyo guryaha ganacsiga oo si gooni ah loo canshuuro), deegaanka 2aad (guryaha ku yaal deegaan qaali ah oo ayana boqoley gooni ah lagu canshuuro) iyo deegaanka 3aad (guryaha danyarta ama hadba inta qol guri oo ayana canshuurta uga yar la dul dhigo). Waa in degmadu maanka ku hayso wax walba waxaa ka horreeya tirokoob canshuur bixiyaha, nidaam iyo carbin shaqaale. Intaas haddii la helo, dhowrkii sanaba hal mar baa boqoleyda canshuurta tartiib-tartiib loo kordhin karaa. Degmadu waa in aysan maanta ku xisaabtamin ee waa in ay ku xisaabtanto waqtiga fog. Waxaa kale oo ayana lagamamaarmaan ah in ay degmadu warbaahinta isticmaasho, shacabkana wacyigaliso oo barto nidaamka canshuur bixinta. Waa in degmada iyo dowladdu kasbadaan dhegaha bulshada.
Annaga oo maanka ku hayna xirfad darrada dalka ka jirta, si saddexda qodob ee kore guul looga gaaro, dowladuna ay u noqoto mid hiigsata hormar joogto ah, waa in “Xafiiska Maareynta iyo Tababarka Degmooyinka” laga hirgaliyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose. Waa in xafiiskaas uu shaqaale cusub ka qorto ardeyda ka qalinjabineysa jaamacadaha dalka, deedna loo helo tababarayaal meel mariya siyaasadda Wasaaradda iyo tan degmooyinka.
Si loo hiigsado hormar iyo isku-fillaan bulsho, waxaa la gaaray waqtigii maamul kasta oo dalka ka jiraa uu maalgashan lahaa tababarka maamulada degmooyinkiisa. Maamul degmo oo tababaran oo ay hagayaan dhallinyaro jaamiciyihiin ah, oo daacad u ah dalkooda iyo deegaankooda, baa suurtagelin kara dowladnimo taam ah oo leh astaamaha kore. Sidaas darteed, waa in Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ay la timaado qorshe cusub oo dabaroga waxa maanta dalka jira.
Dowladdii aan degmooyinkeeda ka suurtagelin qodobada kore ayada oo isticmaaleysa awoodeeda dowladnimo waxa ay muujisey liidnimo maamul. Sidaas darteed, maamul liita in uu magacaabo Guddoomiye Degmo oo ka sii liita waxa ay ka tarjumeysaa shacabka oo la nacsiiyo hannaanka dowladnimo. Shacabka oo la nacsiiyo hannaanka dowladnimana waxa uu abuurayaa hannaan ka baxsan kan dowladeed oo maroorsada awoodda dilka iyo ciqaabta.
Deegaanada Soomaaliya, deegaan walba, maanta ma jiro deegaan aysan buuxdhaafin awooddii fulin laheyd qodobada ciqaabta iyo dilka. Sidoo kale, ma jiro deegaan aan laga hirgelin karin canshuur ururin taageerta fulinta qodobka koowaad iyo kan labaad, iyo dhallinyaro wada jaamiciyiin ah oo u heellan fulinta siyaasadda canshuur ururinta.
Haddaba maxaa badanaa deeganada ka hortaagan fulinta qodobada dowladnimo ee kore? Maxaa degmooyin ganacsi iyo dowladnimo qani ku ah u diidey in ay shacabkooda ka kaafiyaan nabad sugan, ganacsi hanjabaad iyo baad ka sugan, nalal iftiima iyo jidad dhiskooda iyo dayactirkooda aan sannad walba loo baryotegin?
Mise Guddoomiyaha Degmo ee loo igmanayo in uu degmada hormar u horseedo baa ah mid aan aqoon iyo xirfad toona u laheyn sida loo hago hormarka degmo iyo sida loola dhaqmo Golihiisa Deegaan? Mise Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose baa ayana ah magac-u-yaal tayo iyo waxtar toona aan laheyn? Xaggee wax ka khaldanyihiin?
Suurtagal ma aha in bil kasta, sannad kasta, 4 sano iyo 5 sano oo kasta la isweydiiyo wixii kal hore la isweydiinayey. Suurtagal ma aha in aqoonyahanka Soomaaliyeed uu maalin kasta canaan la soo taaganyahay, laakiin uusan hal maalin farta u taagin kaqaybqaadashada hamuunka loo qabo hoggaan degmo iyo mid dowlo. Aqoonyahanka Soomaaliyeed haddii uusan hoggaamin u hamuun qabin, uusan rabin in uu barxadda tartanka siyaasadda soo istaago, raalli ha ka noqdo hoggaan xumada maanta haysata deegaan walba oo Soomaaliyeed, hana la soo shirtago xishood iyo hadal macaan oo qanciya hoggaankaas liita, si ugu yaraan hoggaankaas liita intii la hagi karo loo hago.
………………….. >>>> … <<< …………………..
Maqaalo Kale 316 Qormooyinka Daljir 59 Wararka 21748